Apple Watch ၏နောက်ထပ်ကိုယ်ပွား | Iradish X9 Y6 ၏စပိန်ဘာသာဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Androidsis
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Iradish X9 Y6၊ Apple Watch Clone Bluetooth Smartwatch ကိုယူရို ၃၀ အောက်သာရနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားသောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်အတူပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည် Iradish X9 Y6 သည်စစ်မှန်သော Bluetooth Smartwatch ဖြစ်ပြီး Apple Watch ၏ကိုယ်ပွားဖြစ်သည် ငါတို့ဘာရှာရမလဲ ယူရို (၃၀) အောက်တွင်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များပါဝင်သည်ထိုစျေးနှုန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Iradish X9 Y6 ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော Bluetooth နာရီကိုရရှိရန်ခဲယဉ်းသည်။
Este Iradish X9 Y6စမတ်နာရီထက်ပိုပြီးကျွန်ုပ်တို့က၎င်းကိုစဉ်းစားနိုင်သည် ဂျီအက်စ်အမ်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူဘလူးတုနာရီ Android သို့မဟုတ် iOS စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ရိုးရှင်းသောလက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိပြီး၎င်းကို MicroSIM နှင့် MicroSD မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုရိုးရှင်းစွာထည့်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုသီးခြားအသုံးပြုနိုင်သည်။
1 Iradish X9 Y6 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
2 ဒီ Iradish X9 Y6 ရဲ့အကောင်းဆုံး
Iradish X9 Y6 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပုံစံ X9 Y6
operating system ကိုယ်ပိုင်
ဖန်သားပြင် 1'54 » Radian HD ကို
resolution ကို X ကို 240 240
Processor ကို Mediatek MTK6260A
ဆက်သွယ်မှု Bluetooth 3.0 - ဂျီအက်စ်အမ် 850/900/1800 / 1900MHz - FM ရေဒီယိုနှင့် 32Gb အထိ microSD ကဒ်များအတွက်အထောက်အပံ့။
အခြားသူများကို Pedometer - အိပ်စက်ခြင်းမော်နီတာ - အထီးကျန်ဘဝသတိပေးချက် - အသံဖမ်းစက် - ဖုန်းရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက် - တွက်ချက်မှု - ပြက္ခဒိန်။
ကင်မရာ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အတူ0mpx
ထောက်ပံ့ပုံစံများ WAV MP3 AACVideo format: 3GP
ရှုထောင့် X ကိုက x 4.4 4.2 1.25 စင်တီမီတာ
ဘက်ထရီ 350 mAh ဘက်ထရီ
စြေး ယူရို ၂၉'၉၅
ဒီ Iradish X9 Y6 ရဲ့အကောင်းဆုံး
ဒီဟာကအကောင်းဆုံး ပန်းသီးနာရီ၏တရုတ်ဘလူးတုစမတ်နာရီ ၎င်းသည်၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောဖြစ်နိုင်ခြေများအားလုံးကကျွန်ုပ်တို့အားလက်တွေ့ကျကျရယ်စရာကောင်းသောစဉ်းစားနိုင်သည့်ဈေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်မှာဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအိတ်ကပ်ထဲမှမဖယ်ဘဲဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်၊ ဖြေနိုင်မည်သို့မဟုတ် MicroSIM ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းအားအလိုအလျောက်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်မှာ Android Wear စမတ်နာရီများပင်များသောအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆိုလိုသည်။
လက်ခံရရှိသည့်အသိပေးချက်၏စုံစမ်းမေးမြန်းချက် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည့်မိုဘိုင်းအသိပေးချက်များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုနုတ်ပစ်နိုင်သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ဘလူးတုသ်နာရီသည် Android နှင့် iOS နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် ၎င်းသည်နည်းပညာပစ္စည်းတစ်ခုအားနှစ်သက်သူများအားကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး အနေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့်နာရီတစ်လုံးကိုပျော်မွေ့ရန်ငွေအမြောက်အမြားကိုအသုံးမလိုဘဲနှစ်သက်မည် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကွန်ယက်များရှိစမတ်နာရီ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Iradish X9 Y6၊ Apple Watch Clone Bluetooth Smartwatch ကိုယူရို ၃၀ အောက်သာရနိုင်သည်
ကာရိုလိုင်းနား Macias Mojica ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်ဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်ပါသည်။ သင်အကြံပြုသောစာမျက်နှာတွင် ၀ ယ်ရန်လုံခြုံမှုရှိမရှိကိုသာသိလိုပါသည်
Carolina Macias Mojica အားပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ လုံခြုံစိတ်ချရတယ်၊ ၎င်းသည်တရုတ်ထုတ်ကုန်များ၏အကောင်းဆုံးစတိုးဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါပြီးသားဝယ် already ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ယူရို ၃၀ သာလျှင်ယင်း၏ကြီးမားသောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။
ကယ်ရိုလိုင်းနားကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ Iradish y6 အတွက်အကျီင်္တွေ ၀ ယ်နိုင်တဲ့နေရာကိုသင်သိပါသလား။ ပြီးတော့အဲဒါဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့သလဲ။
Frank Cotes အားပြန်ပြောပါ
ဒံယလေ Mellado ဟုသူကပြောသည်
ဒံယေလ Mellado အားတုံ့ပြန်ပါ
သင့်တွင်တရုတ် #Smartwatch ရှိပြီးသတိပေးချက်များနှင့်ပြproblemsနာရှိပါသလား။ ကောင်းပြီဒီကိုကြည့်ပါ: https://www.androidsis.com/solucionar-problema-de-las-notificaciones-en-smartwatches-chinos/ #android #AndroidWear
Julio Jhonatan Meza Chumpitaz ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ ရက်ကဒီ Iradish Smartwatch ကိုဒီစတိုးမှာပဲ ၀ ယ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော့်မှာကြားချက်ကအပြောင်းအလဲနဲ့အခြေအနေကိုပြနေဆဲပါ။ ဒီဟာပုံမှန်လား၊ ငါစိုးရိမ်ရမလား။ သင်မှာယူသည့်အချိန်အထိသင်မှာယူမှုကိုမည်သည့် အချိန်မှစ၍ ယူခဲ့သနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Julio Jhonatan Meza Chumpitaz အားစာပြန်ပါ
ဖရန့်တစ် ဦး ကကိုးကား ဟုသူကပြောသည်
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ငါဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ (ကာရစ်ဘီယံ - အမေရိကန်အဆက်) မှဖြစ်ပြီး ... ငါသြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ကနာရီကိုတောင်းပြီးငါ့ပြည်နယ်မှာ "procesing" ပုံပေါ်တဲ့အတွက်ငါ Julio လိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိတယ်။ ????
အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ အခုတော့အမြဲတမ်း ၀ ယ်ယူနေတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးပြီလား။ ကင်မရာက 10Mp or 15Mp ??
ကင်မရာက 0.3Mp (သို့) 1.3Mp လား။
၂။ ကင်မရာအမျိုးအစား - တစ်ခုတည်းသောကင်မရာ
နောက်ထပ်သိချင်စိတ်တစ်ခု ... လက်ပတ်နာရီကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုအခြားသိုင်းကြိုးဖြင့်အစားထိုးလိုပါက ... ရောင်းချသောနေရာများတွင် ?? ... ။
David Custodian ဟုသူကပြောသည်
david custodio အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ Android model နှင့် Android model wear မှတဆင့်ဤပုံစံကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သလားဆိုတာကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းမွမ်းမံသည်။
Iphone6မှသတိပေးချက်များကိုသိရန်ထို app သည်သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။
Franciasco Caballero ဟုသူကပြောသည်
အထူးသဖြင့် Las Palmas de Gran Canaria မှကနေဒါနိုင်ငံ၊ ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းတွင်ကျွန်ုပ်အမည်မှာဖရန်စစ္စကိုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်မိုဘိုင်း application ပရိုဂရမ်မာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်နိုင်သည့်နာရီတစ်လုံး ၀ ယ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် LD99 HJSD (GV08S) မော်ဒယ်လ်ရှိပြီး၎င်းသည်သူယူဆောင်လာသည့် WhatsApp ကိုပင် စတင်၍ မရပါ။ အကယ်၍ မင်းကကျွန်တော့်ကိုအကြံပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ပေးမယ့်မော်ဒယ်တစ်မျိုး (သို့) မော်ဒယ်များ၊ ကျွန်ုပ်မှပရိုဂရမ်များတပ်ဆင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်မသိသောအရာများအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။
Franciasco Caballero အားတုံ့ပြန်ပါ
ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုက Sony Xperia Z5 Premium ကို 4K display နဲ့အတူပြသထားပါတယ်